်မိန်းမနှင့် ယောင်္ကျား ဘယ်သူမြတ်လဲ?… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different »်မိန်းမနှင့် ယောင်္ကျား ဘယ်သူမြတ်လဲ?…
်မိန်းမနှင့် ယောင်္ကျား ဘယ်သူမြတ်လဲ?…
Posted by Ko out of... on Feb 29, 2012 in Think Different | 10 comments
မိန်းမနှင့် ယောင်္ကျားခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလည်း နေရာတော်တော်များများ အမျိုးသမီးကို နေရာသိပ်မပေးတာ တွေ့နေရတယ်။ ဒါကြောင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလည်း .. .
ဥပမာ- ယောင်္ကျားတစ်ဦးမှာ – ချောမောလှပတဲ့ ရူပ ကာယရှိတယ်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဓန ပေါကြွယ်တယ် သို့သော် အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းဘူး။ အမျိုးသမီးမှာ ကျတော့ ချောမောလှပမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဓန ပေါကြွယ်မရှိဘူး ဆိုပါတော့။ သို့သော် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ ပိုမြတ်သလဲ . .
မြတ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ဘဲ တိုင်းထွာမလား။ မတူညီတဲ့ ရူပ ကာယရုပ် သဘောတရားနဲ့ တိုင်းထွာမလား? မြတ်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ထဲမှာလား? နာမ်ထဲမှာလား? လူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ထဲမှာလား? ယောင်္ကျားတွေမြတ်တယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်သူရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ အလိုလို ဖြစ်လာတာလား?
မိခင် ဗိုက်ထဲမှာ ကိုးလ၊ ဆယ်လလွယ်.. ပြီးရင် မိခင်ရဲ့ ယောနိကနေ ဖွားမြင်ပေးမှရတာပါ။ နောက်တမျိုး မိန်းမဆိုတာ ဘုန်းကံနှိမ့်တယ် လို့ဆိုကြပြန်သေးတယ်။ ဘုန်းကံဆိုတာ မိန်းမမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရ၊ တလတကြိမ် မသားဥကြွေ သူတို့က ဒုက္ခပိုကြီးတယ် ဒို့ယောင်္ကျားတွေက ဒီဒုက္ခ မရှိဘူး ဒါကြောင့် ဒို့ယောင်္ကျားတွေ ပိုမြတ်တယ် လို့သတ်မှတ်တာလား? မသားဥ မကြွေရင် လူယောင်္ကျား ဖြစ်လို့ရလား? မိန်းမမို့ ဘုန်းကံ နှိမ့်တယ် (…..)မှာနေ..ဟီးဟီး သူတို့ပျော်တဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်လိုနေ စသည်ဖြင့်ပေါ့…မိန်းမထမီ ထိရင်ဘဲ ဘုန်းကံနှိမ့်တယ် ဒါဆို မိန်းမအကြောင်းတွေးရင် ခေါင်းထဲမှာ မိန်းမပုံမပေါ်ရတော့ ဘူးလား?…
ဘုန်းကံဆိုတာကိုက.. ကံပါမှတော့ ကံမှာ ကာယကံ၊၀စီကံ၊ မနောကံ သုံးပါးရှိတယ်။ အဲဒီကံ သုံးပါးကို ကောင်းအောင်မစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ယောင်္ကျားဘဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကံနှိမ့်မှာဘဲ လို့ပြောချင်တယ်…
ဇာတက၀တ္ထုတွေမှာတော့.. မိန်းမဟာ ဘုရားဖြစ်ချင်ရင် ယောင်္ကျားဆု အရင်ပန်ရတယ်
ဒါမှ ဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ် လို့ကြားဖူးတယ်.. ဒါဆို အခုယောင်္ကျားဖြစ်တဲ့လူတွေကို မေးကြည့်မယ်… ကျွန်တော်အရင်ဘ၀က မိန်းမပါ ဘုရားဖြစ်ချင်လို့ ယခုယောင်္ကျားဘ၀ရပြီ ငါကဘုရားလောင်းဆိုပြီး ပြောတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ဦး များရှိပါသလဲ? ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး ရှိခိုး ထောက်ခံတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ဦးရှိလဲ? ဘာကိုကြည့်ပြီး သက်သေထူမှာလဲ? ဘယ်သူက မှန်တယ်လို့ အာမခံချက်ပေးနိုင်လဲ? ဒါတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ်တာဘဲ…
.နောက်တမျိုး ပြောတာနေကြတာကတော့… လက်တွေ့မကျတဲ့ မမြင်ရတဲ့ အရင်ဘ၀က ကံကြောင့် ယောင်္ကျားဖြစ်ရတာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် လူယောင်္ကျား ဖြစ်ဖို့ မသားဥ မပါဘဲ လူဖြစ်နိုင်လား? မိဘက မြေသြဇာသဖွယ်ဘဲ. ဒါဆို ယောင်္ကျားဖြစ်ဖို့မျိုးစေ့ ဆိုတာ မိဘမရှိရဘူးလား.. မိဘက မြေသြဇာသဖွယ်ဘဲဆိုရင် မိဘ မဖြစ်ခင် ကိုယ်က မိဘထက် ကြီးမနေဘူးလား? ခန္ဒာဗေဒ ဘာသာရပ်မှာ ယောင်္ကျားမှာ (- +) Spermသုတ်ပိုး နှင့် မိန်းမှာ(-) Oveamမသားဥ ပေါင်းဆုံတဲ့ အခါ… (- +)ဆိုရင် ယောင်္ကျား၊ (- -) ဆိုရင် မိန်းမ စသည်ဖြင့် ဓါတ်မှန်နဲ့ ကြည့်ပြီး အဖြေထုတ်နိုင်နေကြပြီ…
မွေးရာပါ ခြေလက်မစုံတာလည်း မမြင်ရတဲ့ ကံတွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ မိဘက ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအားနည်းလို့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းလို့ ဖြစ်ရတာကိုလည်း အဖြေရှာတွေ့နေကြပြီ။ အနာကြီးရောဂါလည်းကုသလို့ပျောက်နေပြီ၊ ဖန်ပြွန်သန္ဒေ၊ အဌားကိုယ်ဝန်တွေနဲ့လည်း မွေးလို့ရနေပြီ။ ရင်ချင်းဆက်၊ဦးခေါင်းချင်းဆက် အမွာဆိုတာ အရင်ဘ၀က အကုသိုလ်ဝဋ်ကြွေးလို့ပြောရင်… အပင်တွေ သစ်သီးတွေမှာလည်း.. ရှိနေတာဘဲ…ဒါကိုလည်း ကံလို့ပြောမလား? ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါ..တော်ကြာနေ ဒီကောင်က ရုပ်ဝါဒီ သမားဆိုပြီး အပြစ်ရှာနေဦးမယ်…
ပြောချင်တာ စာတွေ့ဟာ လက်တွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်…
လက်ကောက်ဟာ လက်အတွက်လား? လက်ဟာ လက်ကောက် အတွက်လား?
လက်ကောက်ဟာ လက်အတွက်ဆိုရင် လက်ကောက်မမှန်ရင် လက်ကို ပြင်ရမှာ
စာတွေ့ဟာ လက်တွေ့လောက ဘ၀မှာအသုံးချဖို့ပါ…
လက်တွေ့လောက ဘ၀မှာ အသုံးချလို့မရရင် လူ(လောက) ကိုပြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး..
သများတို့ မိန်းမရှာအပေါင်း တူတော်ဂေါင်းတွေသာ အမြတ်ဆုံးပါချင့်
ဟုတ်တယ်မို့လား … မိပေါက်တို့ ဖြဲမတို့ရေ ဟီးးးး
ဘယ်သူတွေက ဈေးကောင်းရပီး ပိုမြတ်သလဲလို့
ဟေ့ ကို out of မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ယောက်ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မြတ်တာလုပ်မှ မြတ် တာဟေ့။
သတင်းစာထဲမှာ အလုပ်ခေါ်တာကို ကြည့်လိုက်ရင် မိန်းကလေးတွေပိုခေါ်တဲ့ အတွက် မိန်းမတွေက ပိုမြတ်တယ် ထင်ပါကြောင်း……………………..
ခွဲခြားမှူကိုက အတ္တ ပဲ… သူလဲလူကိုလဲလူ…
လူအားလုံးဟာ အတူတူဘဲဆိုရင် ဘုရား ရဟန္တာ ဟာလည်းလူဘဲ ဘာဖြစ်လို့ သူတို့ကို ရှိခိုးရလဲ..ဘာကြည့်ပြီး ရှိခိုးလဲ?
ဘယ်သူပိုမြတ်သလဲဆိုတော့ အစထဲက လူဆိုပြီးဖြစ်လာထဲကမြတ်ပြီးသားပါ
ပိုမြတ်တာက နေထိုင်မှု သန်းရွေက စစ်ခေါင်းဆောင်ကြောင့် နာမည်ကြီးသလို
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က အမျိုးသမီးရေးရာခေါင်းဆောင်ကြောင့် နာမည်ကြီးတာ အတူတူနဲ့
အဲ အမြတ်ဆုံးက ကိုယ့်အတွက်မကြည့်ပဲ အများအတွက် အနစ်နာခံပြီး စိတ်ရင်းစေတနာနဲ့
အလုပ် လုပ်တဲ့သူဟာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ မိဘ ပြီးရင်အမြတ်ဆုံး———–
ုကိုout of ရေ…
မနီပါနှင်.. ဆွေးနွေးနိုင်ပါသှ်း
ကျနော်ပထမဆုံးပေးတဲ.ကွန်မန်.က ယောက်ျားနဲ.မိန်းမ ဘယ်သူသာပြီးမြတ်သနည်းဆိုသော မေးခွန်းအပေါ်
အားလုံးဟာအတူတူဘဲ လူဘဲဆိုပေမဲ့ လူတွေအချင်းချင်းရှိခိုးနေရတာ ဘာကိုကြည့်ပြီး ရှိခိုးနေကြရလဲ?
memeseku ရေ ကျွန်တော်က လူတွေ စဉ်းစားဖို့ အတွက်ရေးပေးတာပါ.. ဘယ်သူပိုမြတ်တယ်လို့ ကျွန်တော် မဆုံးဖြတ်ပါဘူး…
ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့… ဘုရားနောက်ကို လိုက်နေတဲ့လူဟာ
ဘုရားဘာတွေပြောသွားတယ်ဆိုတာကို သေချာလေ့လာဖို့ ပါ…
ဘုရားပြောသွားတဲ့ စကားလေးကတော့ ငါဟာလူတွေရဲ့ ရောဂါကို ကုသတဲ့ အခါလူကောင်ကိုကြည့်ပြီး မပြောဘူး.. လူပေါ်မှာ မှီခိုပြီးလူကိုချယ်လှယ်နေတဲ့ အစွဲဥပါဒါန်ရောဂါ ကိုကြည့်ပြီး ကုသပေးတာ.. တနည်းအားဖြင့် ကာယ၊၀စီ၊မနော ဆိုတဲ့ ကံသုံးပါးရဲ့ လွန်ကျူးမှု ကိုကြည့်ပြီး ပြောတာ..ဒီလွန်ကျူးမှုတွေ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် လူတွေဟာလွတ်မြောက်တယ် ငြိမ်းချမ်းတယ်…ရောဂါဖြစ်တာလည်း ဒီလူကိုယ်ပေါ်မှာ… ရောဂါ ပျောက်တာလည်း ဒီလူကိုယ်ပေါ်မှာဘဲ.. လူတွေရှိပြီးရောဂါ မရှိတော့တဲ့ အဖြစ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုပါ…
ရောဂါဟာ လူကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပွါးပေမဲ့ ရောဂါဟာ လူမဟုတ်ဘူး… လူမဟုတ်လို့လည်း ရောဂါ ပျောက်ရင် လူတွေမှ မပျောက်ဘဲ.. ဒါကြောင့်ဘုရားဟာ လူအကြောင်း ဘုရားမပြောဘူး.. ရောဂါ အကြောင်းသာလျှင်ဘုရားပြောတယ်.. လူအကြောင်း ဘုရားမပြောရင် မိန်းမ၊ယောင်္ကျား၊ အသားအရောင်လူမျိုး အကြောင်း ဘုရားမပြောဘူး…ဒါကြောင့် လူတွေမေးတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ဘုရား ဘာတခုမှ မဖြေခဲ့ဘူး.. ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ လူနဲ့ ရောဂါ ကွဲအောင်မြင်တဲ့ ဒသနမရသေးလို့ အဲဒါကို သိအောင် အရင်လုပ်ရမှာ…
လူနဲ့ရောဂါ ကွဲအောင်မမြင်လို့ ရောဂါကိုတိုက်တာ ဘာဖြစ်လို့ လူတွေသေနေကြတုံး..မကောင်း တဲ့မူစနှစ်ကိုတော်လှန်တာလား? လူကိုတော်လှန်တာလား? မူကိုတော်လှန်ရင် လူတွေမသေရဘူး… လူတွေသေနေတာ ရောဂါ နဲ့ လူ မခွဲခြားတတ်သေးလို့.. ခွဲခြားတတ်အောင် သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီး သူတို့ဆီက တရားကို နားလည်အောင် အရင်လုပ်ရမှာ..
ဘုရားဟာ လူကောင်ကြည့်ပြီး ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းလည်းမပြောဘူး..တကယ်တော့ လူတွေဟာ တယောက်ကို တယောက် ဆက်ဆံ ကြတယ်ဆိုတာ အကောင်ကြည့်ပြီးဆက်ဆံတာများတယ်..
အမှန်တော့ ကံကိုကြည့်ပြီးဆက်ဆံရမှာ… ကံဆိုတာလည်း ကာယ၊၀စီ၊မနော ရဲ့ လှုပ်ရှားရှင်သန်မှု ကိုကြည့်ပြီးဆက်ဆံတာပါ..
မိဘဆရာသမားကို ကန်တော့ တာတောင်မှ ….
မှားယွင်းနေတဲ့ ကံသုံးပါးကို နောက်ထပ်မမှားအောင် ကြိုးစားပါမယ် လို့ပြောတာနဲ့ အတူတူဘဲ..
မမှားအောင်ဆိုတာလည်း သူများလုပ်ပေးလို့ မရဘူး.. ကိုယ့်ဟာကို ဆင်ခြင်ပွါးများရမှာ…
မိဘတွေသားသမီးကို ချစ်တာတောင် လူအကောင်ကို ကြည့်ပြီးချစ်တယ်လို့ထင်နေကြတာ အမှန်တော့ (ကာယ၊၀စီ၊မနော) ဆိုတဲ့ ကံကိုကြည့် ပြီးဆက်ဆံတာ ..မယုံရင် ကိုယ့် သားသမီး မိဘများကိုယ့်ကို ဆဲကြည့်ပါလား ဘယ်သူကချစ်နိုင်မလဲ? …တကယ်တော့ လူကို ချစ်တာမဟုတ် ကံ ကိုချစ်တာ လို့ပြောရမှာ…